साविक तिनाउ मिसन बैंकको २ वर्षको बोनस सेयर पाउन कर जम्मा गर्न सेयरधनीसँग आग्रह Bizshala -
साविक तिनाउ मिसन बैंकको २ वर्षको बोनस सेयर पाउन कर जम्मा गर्न सेयरधनीसँग आग्रह
काठमाण्डौ । साविकको तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको बोनस सेयर करबापत रकम तिरेपछि मात्र सेयरधनीहरुले पाउने भएका छन्।
सिटिजन्स बैंकले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै साविकको तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको गत २ आर्थिक वर्षको बोनस सेयर पाउनका लागि सेयरधनीहरुलाई करबापत रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको हो। सिजिटजन्स बैंक इन्टरनसेनलले हालै तिनाउ मिसनलाई प्राप्ति गरेको थियो।
सिजिटन्स बैंकले तिनाउ मिसनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ का लागि जारी गरेको बोनस सेयर प्राप्तिका लागि सेयरधनी आफैँले करबापत रकम तिर्नुपर्ने भएकोले यस्तो आग्रह गरेको हो। तिनाउ मिसनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १२ प्रतिशत र २०७६/७७ का लागि ६ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गरेको थियो।
यी दुवै आर्थिक वर्षको बोनस सेयर करबापतको रकम जम्मा गरेपछि मात्र सेयरधनीहरुको हितग्राही खाता (डिम्याट) मा जम्मा हुने बैंकले जनाएको छ।
यसका लागि साविकका तिनाउ मिसनका सेयरधनीहरुले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसन लिमिटेडको काठमाण्डौ नारायणहिटीपथस्थित शाखामा रहेको सेयर जिस्ट्रार सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडको नाममा रहेको ००१०१००००४११९२०१ खाता नम्बरमा करबापतको रकम जम्मा गर्न सिटिजन्स बैंकले आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रियस्तरका अधिकांश विकास बैंकको मुद्दति निक्षेपको
काठमाण्डौ । राष्ट्रियस्तरका अधिकांश विकास बैंकहरुले मुद्दति...
कर्जा लगानीमा आक्रमक बन्दै विकास बैंक, निक्षेपको अवस्था के छ ?
काठमाण्डौ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक कर्जा लगानीमा आक्रामक...
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन्
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो १५ औँ वार्षिक साधारणसभा...
कर्जा लगानीमा आक्रामक बन्दै विकास बैंक, निक्षेप पनि बढाउँदै
काठमाण्डौ । पछिल्लो एक साताको अवधिमा राष्ट्रियस्तरका विकास...
एक सातामै वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी रु. २२ अर्बले बढ्यो,
काठमाण्डौ । पछिल्लो एक साताको अवधिमा वाणिज्य बैंकको निक्षेप संकलन...
धितो फिर्तासम्बन्धी समाचारप्रति महालक्ष्मी विकास बैंकको
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी विकास बैंकको कुमारीपाटी शाखामा सुन धितो...
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको वित्तीय अवस्था सुधारोन्मुख, नाफा
काठमाण्डौ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो...
सर्वाधिक नाफा कमाउने विकास बैंक बन्यो मुक्तिनाथ, ईपीएसमा
काठमाण्डौ । राष्ट्रियस्तरका सबै विकास बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष...